I-Spotify iyaqhubeka nokutyala imali kwi-podcasting ngeetshathi ezintsha | IPhone iindaba
I-Spotify iyaqhubeka nokutyala imali kwi-podcasting ngeetshathi ezintsha
Ingelosi Gonzalez | 15/04/2021 23:59 | Iapps zokusebenza, Izaziso
Los podcasts okoko kwaqala ubhubhane baye baba kukuzonwabisa okuqhubeka ngokufunwa phakathi kwawo onke amaqela eminyaka. Ukwahluka komxholo, kunye neyantlukwano 'yeepodcasters' yenza enye indlela yokudlula ixesha ngelixa usenza imidlalo okanye uphumle, umzekelo. Olu tshintsho luthandwayo luyaziwa ziinkampani ezinkulu kwaye zombini iApple kunye neSpotify, phakathi kwabanye, batyale imali ekuphuculeni amaqonga abo ukulungiselela ipodcast. Ngesi sihlandlo, i-Spotify isungule Iitshathi zepodcast ngelizwe njengokuba zifumaneka ngeengoma. Ziyafumaneka kwamanye amazwe kwaye ziya kulungelelaniswa nejografi yehlabathi kwixa elizayo.
I-Spotify iyaqhubeka nokukhulisa ii-podcast ngeetshathi ezintsha
Ukukhutshwa namhlanje kwiimarike ezingama-26 kwiSpotify yezixhobo eziphathwayo (i-iOS kunye ne-Android), uluhlu aluzukukwabelana ngeyona mikhombandlela ikhawulezayo yomzuzu kunye nabasebenzisi, kodwa luya kudwelisa eyona miboniso ithandwayo kwingingqi yakho. abaphulaphuli bamva nje.
Ngokushicilelwa nguSpotify wabhengeza ukufika kwe Iitshathi zepodcast ukuya eUnited States, eUnited Kingdom, eBrazil, eJamani, eMexico naseSwitzerland. La ayakuba ngamazwe okuqala azokwazi ukubona ngendlela efanayo naleyo benza ngayo ngeengoma, Iipodcast ngokuhamba, ukunyuka kunye nentshukumo yabo yokuthandwa. Iintolo ezibomvu neziluhlaza zibonisa ukuba ngaba ipodcast ekuthethwa ngayo iphakanyisiwe okanye yehlile kuluhlu lwabaphulaphuli.
Ukongeza, kukhatshwa kukufika kuka iwebhu ekhethekileyo zinikezelwe ngokukodwa kwiipodcast. Kuyo ungabona isikhundla ukongeza ekuhleleni ngokwamacandelo anamhlanje, alula kwaye anakekelwa kakuhle kwiSpotify. Kodwa le webhusayithi ifumaneka eUnited States, okwangoku.
Ngale nto intsha I-Spotify ijika ngokukodwa kwii-podcasts. Amanye amazwe, afana ne-United States, anemisebenzi eyahlukeneyo ejikeleze olu hlobo lomxholo kunye nohlu lwadlalwayo: ezona zithandwayo, ii-podcasts ezithandwa kakhulu, ezona ziqendu zidumileyo, amanani-manani akhethekileyo kwisiqendu ngasinye, kunye neendlela ezintsha zokwabelana ngomxholo kwinethiwekhi yoluntu.
Spotify -Umculo kunye neepodcastMahala
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » I-Spotify iyaqhubeka nokutyala imali kwi-podcasting ngeetshathi ezintsha